Hlola iBangkok, Thailand - World Tourism Portal
Hlola iBangkok, Thailand
Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eBangkok Thailand
Ongakwenza eBangkok, Thailand
Uhambo losuku kusuka eBangkok
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni eBangkok, Thailand
Bukela ividiyo ekhuluma ngeBangkok, eThailand
Hlola iBangkok inhlokodolobha ye Thailand Igama lakhe elisemthethweni iKrung Thep Maha Nakhon, futhi enabantu abaningi abangaphezu kwezigidi eziyishumi nanye, idolobha elikhulu kunawo wonke. Hlola iBangkok ngezakhiwo zayo eziphakeme kakhulu, ukugcwala kwethrafikhi esindayo, ukushisa okukhulu kanye nobusuku obunzima bokuhamba ebusuku okungenzeka kungakunikezi umbono omuhle kakhulu - kepha ungavumeli lokho kukudukise. Ingenye yamadolobha amakhulu kakhulu ase-Asia anamathempeli amahle nezigodlo, imisele yangempela, izimakethe ezimatasa nobusuku obumnandi obunempilo obunokuthile komuntu wonke.
Iminyaka, bekuyisito esincane nje sokuhweba emabhange oMfula iChao Phraya, kuze kube yilapho iNkosi uRama I, inkosi yokuqala yombuso wamanje wakwaKakri, yaphenduka inhloko-dolobha yeSiam e1782, ngemuva kokushiswa kwe-Ayutthaya yiBurmese abahlaseli kodwa azange bathathe izintambo ku-Ayutthaya. Kusukela lapho, iBangkok isiphenduke indlu yomcebo kazwelonke futhi isebenza njengesikhungo saseThailand esingokomoya, amasiko, ezepolitiki, ezentengiselwano, ezemfundo kanye nezokuxhumana.
Kusukela lapho ufika, iBangkok ihlasela elivuselelayo ezinzwa. Ukushisa, umsindo, kanye nephunga kuzokushiya unomsindo uma ungajwayele ubuhlanya bemizi yase-Asia. Ngempela akuyona indawo lapho abantu abaningi beyokhohlwa ngokushesha.
Izifunda ze Bangkok
I-Bangkok yidolobha elishisayo nelinye lamadolobha anobungani kakhulu e-Asia. Ukuhlaselwa ngolaka ezinzwa, izivakashi zibhekana ngqo nokushisa, ukungcola, isiko elinethonya lokumamatheka kanye nokumamatheka okungalawuleki okuhambisana nokuhamba okuningi kukaThais. Yize kukhona imibiko yezindaba zamazwe omhlaba jikelele nokuzwakala kokuqala, idolobha liphephile ngokumangazayo (ngaphandle kobunye ubugebengu obuncane), lihleleke kakhulu kunokuba livela ekuqaleni, futhi ligcwele amagugu afihliwe alinde ukutholakala. Umswakama ophezulu ohlobene nokushisa okufudumele kuthanda ukukhula kwezitshalo ezishisayo. Uzothola ama-orchid nezithelo ezimnandi yonke indawo. IBougainvillea ne-frangipani ziyaqhakaza cishe kulo lonke idolobha. I-Thai cuisine idume ngokufanelekile, ngesinongo, ngokuhlukahluka futhi iyabiza. I-Bangkok yabaningi imelela inhlokodolobha yase-Asia ephindwe kabili. Izindela ezigqoke izigqoko zaseSaffron, izimpawu ze-garon neon, izakhiwo ezihle zaseThai, izitsha ezi-spice, izimakethe ezimibalabala, ujamu wethrafikhi kanye nesimo sezulu esishisayo sihlangana ndawonye ngengozi. Kunzima ukusuka nokuvela okufudumele kwedolobha.
“IBangkok” ekuqaleni kwakuyidolobhana elisentshonalanga noMfula iChao Phraya. Ngemuva kokuwa kwe-Ayutthaya ngasekupheleni kwekhulu le-18th, iKing Taksin the Great yaphenduka lelo dolobhana laba inhloko-dolobha entsha kaSiam futhi waliqamba kabusha ngokuthi yiThonburi. E-1782, iKing Rama I yathutha inhlokodolobha yaya ngasempumalanga yomfula eRatanakosin; ekuqaleni indawo yomphakathi waseChina, owathuthelwa ngaphandle kwezindonga zedolobha elisha waya e-Yaowarat. INkosi uRama ngabiza igama lomuzi iKrung Thep, njengoba manje yaziwa ngokuthi yiThais futhi ngesiNgisi ihunyushwa ngokuthi "Idolobha Lezingilosi".
Igama eligcwele lomuzi libhalwe njengegama lendawo ende kunazo zonke emhlabeni ngeGuinness Book of Record.
Noma ngabe isiphi isizini oyivakashelayo, ungathathi kancane isimo sezulu - ukunyathela ithempeli elangeni elihangayo ntambama kungaba yinselelo, ngakho-ke zilungiselele kahle. Gqoka kalula isimo sezulu, kepha khumbula ukuthi ezinye izigodlo nawo wonke amathempeli (ikakhulukazi i-Grand Palace) anekhodi yokugqoka eqinile. Qiniseka futhi, futhi lokhu ngeke kushiwo ngokwanele, phuza uketshezi olwanele! Awunaso isizathu sokungaxhamazeli, ngoba i-7-Elevens kanye nezinye izitolo ezilula zigcwele eBangkok futhi zithengisa iziphuzo ezipholile. Abantu bendawo bathola amanzi abo emishini yokuhlanza ye- “reverse osmosis”.
Ongakubona eBangkok, Thailand.
E-Bangkok Thailand ungakwazi
Umkhosi Wonyaka Omusha WaseShayina. Janawari noma uFebhuwari. Indawo esobala ongavakashela kuyo yiJaowarat, isifunda saseChinese saseBangkok. Umgwaqo i-Yaowarat uvaliwe ezimotweni nasezitolo eziningi nasekudleni kugcwele umgwaqo, kunama-grandiose nama-Chinese coliese amahle nodrako.
Ingoma yoMkhonto. I-14-16 Apr. INdabuko yoNyaka omuSha waseThai iyisikhathi sezingxabano kulo lonke idolobha, kodwa ikakhulukazi eSanam Luang, eduze naseGrand Palace, lapho kuboniswa khona isithombe se-Phra Phuttha Sihing futhi sihlatshwe abazinikele. Endaweni yaseWisut Kasat, kunomncintiswano wobuhle bukaMiss Songkran futhi uhambisana nokwenziwa kokuzijabulisa nokuzilibazisa. Ungacabangi ukuthi ngumkhosi onokuthula ikakhulukazi; I-Khao San Road igoba endaweni yempi njengoba ama-farangs futhi abantu bendawo befikelwa omunye nomunye ngabalaphi abaphambili.
Umkhosi Wokulima Ubukhosi. Meyi. Abalimi bakholelwa ukuthi isiko lakudala leBrahman, elenziwa eSan Lu Luang, liyakwazi ukuqagela ukuthi inkathi ezayo yokukhula izoba yinala yini noma cha. Umcimbi uqala emuva eMbusweni weSukhothai. Lo mgomo wethulwa kabusha kwi-1960 yiNkosi Yakhe Ehlonishwayo uBhumibol Adulyadej futhi uthathwa njengokuqala ngokusemthethweni kwesikhathi sokukhula kwelayisi (nenkathi yemvula). Kulezi zinsuku, lo mcimbi wenziwa nguCrown Prince Maha Vajiralongkorn.
Loi Krathong. Novemba. ILoi Krathong inguMkhosi wezibani, futhi kwenzeka kusihlwa senyanga egcwele yenyanga ye-12th kwikhalenda lendabuko laseThai lesiko. Khalenda lasentshonalanga lokhu kuvame ukuna ngoNovemba.
I-Trooping of the Colors. Disemba. Ubukhosi bawo uKing noNdlovukazi baphethe lo mcimbi omangalisayo waminyaka yonke, obanjelwe eRoyal Plaza eduze kwesithombe seNkosi Rama V esiseDusit. Egqoke imifaniswano enemibala emihle, phakathi nokugcwala okuningi kanye nomkhosi, amalungu e-Royal Guards asekhulile afunga ukuthi azithobe eKosini futhi ahambisane namalungu edlule weRoyal Family.
HM Imikhosi Yokuzalwa Yenkosi. UDisemba 5. Kulolu suku, umgwaqo uRatchadamri kanye neGrand Palace kuhlotshiswe kahle futhi kukhanyisiwe. Kusihlwa, izinkulungwane zabantu bendawo zilandelana zisuka eSanam Luang ziye eSigodlweni saseChitralada ukuze zithole ukubonwa yiNkosi lapho idlula kancane iqhutshwa yiningi.
Imigubho Yonyaka Omusha Wokwehla. UDisemba 31. Umkhosi owaziwa kakhulu futhi omkhulu we -downdown eBangkok ubanjelwa eCentral World mraba phambi kweCentral World. Kunemibukiso ebabazekayo namakhonsathi abukhoma esiteji abahlabeleli nabadumile. Ngemuva kwamabili, bagubha ngemicibisholo egqamile nemililo emibalabala.
Ukuthi uzodlani eBangkok
Ubusuku bukaBangkok budalwa budlabha, kepha akuyona into obekuyiyo ngaphambili: ngenxa yemikhankaso yokuhlelela umphakathi yakamuva. Izindawo zokudlela eziningi, imigoqo kanye namakilabhu manje sekufanele kuvalwe e-02: 00 AM, yize okumbalwa kuhlala kuvulekile kuze kube isikhathi esizayo. Imigoqo engekho emigwaqweni engahleliwe ihlala ivulekile ubusuku bonke, ikakhulukazi eSukhumvit nakuLou San Road. Kufanele uphathe ipasipoti yakho yokuhlola ama-ID namaphoyisa ngezikhathi ezithile zokuhlasela kanye namakilabhu, ubeke wonke amakhasimende ekuhlolweni kwezidakamizwa nokuseshwa, noma lokhu kwenzeka kakhulu ezindaweni eziphelela umphakathi ophakeme weThais kunabafokazi.
Enye yezifunda ezinkulu zeBangkok yiSilom, ekhaya hhayi kuphela izigcawu ezaziwa kakhulu zomhlaba zokuhamba nge-bar-strip Patpong, kodwa izikhungo eziningi ezisemthethweni ezinikeza konke ukunambitheka. Kwesiphuzo esinombono, imigoqo evulekile yophahla lwendlu evulekile yeVertigo neSirocco iyakhanga ikakhulukazi. Inani elikhulu le-superhip kanye nemigoqo ebizayo futhi nama-nightclub angatholakala endaweni ephakeme yeSukhumvit, kanye nendawo ye-Thong Lo.
IHippie hangout iPan San Road nayo iqinisa kancane futhi isibalo sentsha enobuciko baseThailand nayo yenze uphawu lwayo lapho. Ukuphuma ngomgwaqo uLou San Road kujwayelekile kakhulu, kuhleli eceleni komgwaqo ubukele abantu bedlula, kepha iGazebo Club yibala lasebusuku elihlala livulekile lize liphume ilanga. Iningi lamaThais amancane bathanda ukubuthana bezungeza iRatchadaphisek, ekhaya kuyiRoyal City Avenue strip yama-nightclub.
Ukubhema kwenqatshelwe kuzo zonke izindawo zokudlela, imigoqo kanye nama-nightclub, noma ngabe kunomoya noma akunawo umoya. Kuyamangaza iThailand, lo mthetho awuphoqelelwa ngokuqinile.
Go-go kanye nemigoqo yobhiya
Ibha yokuhamba iyisikhungo sika-Bangkok "wasemanzini wasebusuku". Ngokuhamba nje okujwayelekile, abadansi abaningana abadansi be-bikinis (noma ngaphansi) bagxila esiteji, behlikihla beya emculweni omkhulu futhi bezama ukubamba iso labalaleli. Abanye (kodwa hhayi bonke) baphinde babeke imibukiso lapho amantombazane enza khona esiteji, kepha ngokuvamile lokhu kungamathengi kunalokho obekulindelwe - ubunqunu, ngokwesibonelo, bunqatshelwe ubuchwepheshe. Ebhareni likabhiya, azikho izigaba futhi amantombazane agqoke izingubo zasemgwaqweni.
Uma lokhu kuzwakala njengendawo embozwe ngeveli yokufeba, kunjalo. Yize abanye bekhomba inani elikhulu lama-GI aseMelika ngesikhathi sempi yaseVietnam njengesiqalo sokuhweba okuphathelene nobulili kwaseThai, abanye bathi isimo samanje seThai maqondana nobulili sinemvelaphi ejulile emlandweni waseThai. Yomibili imigoqo yokuhamba nobhiya ibhekiswe kubakhenkethi bangaphandle futhi kuphephile ukucabanga ukuthi iningi uma kungenjalo bonke abakwaThais abakuso. Lokho kusho, kulungile ukubuka le mibukiso ngaphandle kokubamba iqhaza, futhi kunemibhangqwana eminingi futhi enelukuluku lokwazi ngisho nethimba labavakashi abakhona ngezikhathi ezithile. Indawo enkulu izungeze iPatong eSilom, kepha imigoqo efanayo naleyo esePhatpong itholakala eSukhumvit. I-Soi 33 igcwele imigoqo yehostela, ephezulu kakhulu futhi ayifaki ukudansa kwe-go-go.
Njengomgoqo wokuhamba eduze kwe-01: i-00, kunamakilabhu abizwa ngehora lesikhathi ahlala evulekile kuze kuphume ilanga. Akunzima ukuthola - nje hop hop etekisini. Abashayeli bamatekisi bazimisele ngokukuyisa lapho, njengoba bethola ikhomishini enkulu kakhulu kubanikazi bekilabhu ukuletha kuwe - ungagibela mahhala. Lawa makilabhu ngokuvamile azizwa edabukisayo futhi enobudlova, futhi kukhona okubizwa ngokuthi “ama-freelancers” phakathi kwamantombazane.
IBangkok iyaziwa ngemigoqo yayo yokuhamba ngomzimba nokufeba okuhambisana nakho. Ngobuchwepheshe, ezinye izici zokuthengisa ubufebe azikho emthethweni (isib. Ukucela, ukugudluza), kepha ukusebenzisa akuvamile, futhi ama-brothels ajwayelekile. Akukona okungekho emthethweni ukukhokhela ucansi noma ukukhokha “inhlawulo yebha” (imali eqoqwa ngumgoqo uma ufuna ukuthatha isisebenzi).
Iminyaka yemvume eThailand yi-15, kepha kusebenza ubuncane be-18 uma kubhekwa izifebe. Izinhlawulo zokuya ocansini nezingane zimbi.
Njengakwezinye izindawo eThailand, qaphela ukuthi udlani. Ngaphandle kwamahhotela amakhulu nezindawo zokuvakasha ezinkulu, hlala kude nemifino enamahlamvu aluhlaza, ukugqoka okususelwa kumaqanda njengemayonnaise, u-ayisikhilimu ongafakwanga nenyama eyosiwe njengoba isimo sezulu esishisayo sivame ukwenza ukudla kungahambi kahle. Ngamafuphi, namathela kokudla okubilisiwe, okubhakiwe, okuthosiwe noma okubunjiwe.
Amanzi ompompi eBangkok kuthiwa aphephile lapho kuphuma isitshalo, kodwa ngeshwa ukugcwala kwamanzi ngasendleleni kaningi akuyona, ngakho-ke kuwukuhlakanipha ukugwema ukuphuza izinto, ngisho nasemahhotela. Noma imaphi amanzi owanikezwe ezindaweni zokudlela ezinhle okungenani uzobiliswa, kepha kungcono uku-oda amabhodlela abekwe uphawu, atholakala yonke indawo ngamanani aphansi.
Kwezinye izindawo, njenge-sois emincane ezungeze i-San San Road, kunemishini yokuhlunga esebenza ngohlamvu lwemali, ekuvumela ukuba ugcwalise amabhodlela akho okuphuza ngamanzi aphephile. Le mishini yokuthengisa ivame ukubonwa isetshenziswa abantu bendawo, ngakho-ke kufanele iphephe.
Lam Phaya Intambo Emakethe- Ukugibela imizuzu engu-30-ukusuka eBangkok
Imakethe Yokwehla Kenga Lat Mayom
Amphawa - izimakethe ezintantayo ezihehayo ezithandwa ngabantu bendawo
I-Ayutthaya - inhlokodolobha yasendulo ikhombisa amanxiwa ayo amaningi, amahora angu-1.5 kude ngebhasi noma ngesitimela
I-Bang Pa-In - Isigodlo sayo sasehlobo esijabulisayo senza uhambo oluhle losuku
UDamnoen Saduak - imakethe entantayo yesithombe-ephelele
I-Hua Hin - indawo yedolobha elingasogwini enezimpophoma eziseduze namapaki ezwe
IKanchanaburi - iBhuloho elidumile elingaphezu koMfula Kwai, i-Erawan Falls kanye nesihogo Somlilo
UKo Kret - isiqhingi esincane esivuthayo enyakatho yeBangkok esidume ngamaphakethe waso, uhambo losuku oluhle ukuphuma ehlathini lukakhonkolo
I-Nakhon Pathom - Idolobha elidala laseThailand nendawo yesitepe esikhulu kunazo zonke emhlabeni
I-Phetchaburi - idolobhana elivuselelekayo elinomlando nentaba yaseLang Wang, amathempeli anemibala nama-dessert amnandi
I-Chiang Mai - isango elisenyakatho nenhliziyo yesiko likaLanna
I-Khao Yai National Park - izindawo ezinhle kakhulu zezintaba kanye nezinye zezivini zaseThailand ezisanda kwenziwa
UKo Chang - isiqhingi esikhulu esishisayo esishisayo esingatheni
UKo Samet - isiqhingi esiseduze kakhulu solwandle ukuya eBangkok ngamabhishi esihlabathi esimhlophe
Isifundazwe saseKrabi - amabhishi amahle neziqhingi zase-Ao Nang, Rai Leh, Ko Phi Phi naseKo Lanta
I-Nakhon Ratchasima (Khorat) - idolobha elikhulu esifundeni sase-Isaan
Phuket - isiqhingi saseParadesi sokuqala sasePharadesi, sesithuthukisiwe kakhulu kodwa sisenamabhishi athile amahle
ISukhothai - amanxiwa oMbuso WaseSukhothai wasendulo
I-Surat Thani - ikhaya loMbuso wangaphambili weSrivijaya, isango leKo Samui, Ko Pha Ngan noKa Tao
I-Koh Samui - isiqhingi sobuhle bemvelo ne-charm
Hlola iBangkok nabangani kanye nomndeni futhi izinkumbulo azisoze zaphela